भूल बिदा - अक्टोबर क्रान्ति दिवस
दिन को अक्टोबर क्रान्ति को लामो छुट्टी छलफल गरिएको छ। नोभेम्बर7मा आफ्नो मनाइन्छ। पुरानो शैली महत्वपूर्ण घटना 25 अक्टोबर मा भयो, तर पहिलो कुरा पहिले।
कि बन्द दिनुभएको विद्रोह
महान् अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति 25 अक्टोबर, 1917 पूरा भएको थियो। अक्टोबर 26 को रात मा Bolsheviks शक्ति जफत। निर्देशित grandiose विद्रोह व्लादिमीर Ilich लेनिन। अक्टोबर क्रान्ति दिवस - - नोभेम्बर7मा धेरै वर्ष को लागि यो घटना पछि एक राष्ट्रीय छुट्टी छलफल भएको थियो। सरकार बन्द गर्न एक को नागरिक, तर2दिन दिने निर्णय गरे। हामी मात्र होइन सातौं तर नोभेम्बर को आठौं विश्राम। अघि वा पछि यी दुई दिन खस्यो भने, मान्छे 3-4 दिनको लागि आधिकारिक विश्राम। म यो सबै प्रेम गर्नुभयो।
ती दिन त्यहाँ वयस्क लागि कुनै त्यस्तो लामो नयाँ वर्ष बिदा, त्यसैले अक्टोबर क्रान्ति को दिन, सुत्न र यो काम गर्न समय छैन जान प्रतीक्षा सबै थिए। तथापि, सबैलाई दिन एक प्रदर्शन आयोजित जस्तै, नोभेम्बर7मा सुत्न आत्मसमर्पण गर्न सक्षम थियो। बिहान सबेरै आफ्नो कर्तव्य स्टेशन मा काम ब्यानरहरू, कागज को विशाल फूल लिन आए र हिंडे लाल वर्ग। यसलाई नोभेम्बर को सातौं थियो।
सोभियत संघ मा रूपमा भोज मनाइन्छ
को अक्टोबर क्रान्ति को दिन लिए स्थान मजा। को प्रदर्शनकारियों को बाँध्न मा मजाक र हास्य सुने थिए। यो मात्र होइन facilitated थियो एक उत्सव मुड, तर पनि बलियो पेय। यसलाई कडाई वर्जित थियो हुनत, तर केही बन्द अलि रक्सी पिउन स्तम्भ देखि एक समयमा एउटा सानो समूह लड्न व्यवस्थित। ज्यादातर मानिसहरू छैनन् निस्सन्देह, यो लामो लाल वर्ग को आगमन अघि गएका गर्नुपर्छ र यस्तो व्यवहार द्वारा पाप, र त्यसपछि पनि सबै।
पिउने मात्र होइन प्रदर्शन, तर पनि घर छ। सबै पछि, अक्टोबर क्रान्ति को दिन ठूलो छुट्टी छलफल भएको थियो। निस्सन्देह, यो छैन नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या, तर उत्सव हिट को स्कोप छ। को पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री एक फर कोट, Olivier अन्तर्गत माछा सहित स्वादिष्ट व्यञ्जन, धेरै गरे। उद्यम मा महत्वपूर्ण घटना द्वारा छुट्टी बुकिङ दिइएको थियो। सेट धूम्रपान ससेज, छम, चकलेट, रातो कावीयार समावेश। ती दिन, यी उत्पादनहरु छोटो आपूर्ति मा गरिएको छ, त्यसैले अक्टोबर क्रान्ति को दिन - यो पनि खान मौका छ।
शरद ऋतु सप्ताह मानिसहरू, प्रत्येक अन्य गरेको घरमा भ्रमण celebratory toasts सुनिन्थ्यो। कि अक्टोबर को दिनको 1917 को क्रान्ति, सोभियत मान्छे आराम र मनाउन लागि वर्ष यो सम्भव गरे।
आज नोभेम्बर 7
हालैका वर्षहरूमा मा, उत्सव भूल। अब, 4-5 नोभेम्बर मा चिनो राष्ट्रिय एकता दिवस। यो मान्छे रोक्न क्रममा सहित गरेको थियो किनभने हराएको छुट्टी आफ्नो dissatisfaction व्यक्त गरे। र, तर किनभने अतिरिक्त उत्पादन को ideological कारण जो कोहीले इन्कार भनेर असम्भाव्य छ। अब पनि ठूलो भयो। आखिर, नोभेम्बर को सुरुमा बाँकी बाहेक, त्यहाँ काम गर्न जान एक संभावना र प्रारम्भिक जनवरी मा केही दिन छ।
सबैले महान् अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति को दिन मनाउन रोकियो। पार्टी प्रतिनिधिहरु अझै पनि सोभियत अवधिको प्रत्येक अन्य र राजनीतिक तथ्याङ्कले मनाइन्छ। को कम्युनिस्टों प्रदर्शन अब लाल वर्ग अब संगठित, तर। छुट्टी गतिविधिहरु, तपाईं पहिलो सरकार संग बातचीत गर्नु पर्छ, र अनुमोदन पछि ब्यानरहरू बाहिर जानुहोस्। नोभेम्बर7लिखित slogans को कम्युनिस्टों मात्र, विरोध पनि दिनमा सक्रिय संग देख्न सकिन्छ। तथापि, processions शान्तिमा सबैभन्दा भाग लागि र प्रमुख घटना बिना छन्।
एक छुट्टी सप्ताह कसरी खर्च गर्न जुन आफूलाई लागि निर्णय मा
आन्तरिक मामिला मंत्रालय को दिन मा बधाई
आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको लागि सबै भन्दा राम्रो छुट्टी: नयाँ वर्ष परिदृश्य
वर्षको एक खुसी थियो के परम्परा पालन गर्न बपतिस्मा को के नम्बर र मनाउन
र तपाईं उपहार कसरी दिन थाहा?
मार्च 8 मा असामान्य बधाई - हरेक स्त्रीको सपना
ASUS P5GD1 motherboard: चश्मा, समीक्षा र तस्बिरहरू
आय कर फिर्ता को घोषणा को पेश्की लागि म्याद। कर छूट लागि के आवश्यक छ
Pies लागि खमीर आटा लागि एक रोचक नुस्खा
बिक्री मा "वाह-प्रभाव": उदाहरणहरू
ट्विंक - के यो छ? ट्विबक्स कसरी बनाउने?
संगठन को विधान के हो र यो दर्ता परिवर्तनहरू उत्पादन कसरी
"नाकमा हैक": वाक्यांश, मूलको अर्थ
कान छेड्नु र अनुष्ठान को सुविधाहरू
Biopolymers - ... प्लान्ट पलिमर छ
फिनिस राष्ट्रपति Tarja हेलोनेन: जीवनी, राजनीतिक क्यारियर, परिवार, र रोचक तथ्य
फिनल्याण्ड: जनसंख्या। फिनल्याण्ड र यसको सबै भन्दा ठूलो शहर
दिवालियापन - यी बजार अर्थतन्त्रको वास्तविकताहरु हुन्